15as International gvSIG Shirka - Maalinta 2 - Geofumadas
15as International gvSIG Shirka - Maalinta 2
Nofeembar, 2019 GvSIG, tabo cusub
Geofumadas wuxuu shaqsi ahaantiisa daboolay seddexdii maalmood ee 15as Maalmaha Caalamiga ah ee gvSIG ee Valencia. Maalintii labaad kalfadhiyada ayaa loo qaybiyay '4' heats blocks sida kii hore, oo ka bilaabmaya gvSIG Desktop, wax walba oo laxiriira wararka iyo isku xirnaanshaha nidaamka ayaa halkan lagu soo bandhigay.
Kuwa ku hadla magaca koowaad, dhammaan wakiillada ururka gvSIG Association, ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin
Maxaa ku cusub gvSIG Desktop 2.5? waxaa fuliyay Mario Carrera,
Soo-saare cusub oo muuqaal ah: isku-dhufashada fursadaha gvSIG Desktop,
Soo helitaanka matoorka cusub ee gvSIG Desktop-ka,
JasperSoft: tusaalayaal adeegsiga is dhexgalka naqshadeeye warbixin ee gvSIG Desktop Waxaa qoray José Olivas.
Marka ku xigta, loo yaqaan 'theatic block' waxay u dhigantaa Maamulka Dawladda Hoose, iyadoo lagu furayo wareegaan Mr. Álvaro Anguix, oo uu ku qoran yahay warqadda Baahiyaha iyo faa iidooyinka hirgelinta IDE ee heer degmo, oo tilmaamay in marar badan xogta / goobta ay ku sugan tahay aysan qasab ahayn in la tilmaamo howsha qaarkood ama ifafaalooyin dhaca, laakiin, waa qeyb muhiim ah oo xog badan oo hadhow bixin doonta maamul gudaha iyo ka wanaagsan.
Waxyaabaha dhabta ah ee aan ka helno maamullada degmooyinka, ayaa ah in macluumaadkaasi jiro, laakiin lama oga inuu jiro, taasi waa, looma qorin, lamana yaqaan, oo aan si hoose ula wadaagin heerka degmada. Sidoo kale, xaalado badan ayaa jira nuqul ka mid ah macluumaadka, degmooyin aad muhiim u ah ma lahan qorshe waddo oo gaar ah, laakiin, booliisku waxay leeyihiin mid, qorshaynta magaalooyinka ayaa mid kale adeegsata, taasina waa in macluumaadka sawirada halka macluumaadka oo dhan la xoqay ay waajib tahay inay ahaadaan kuwo gaar ah oo la cusbooneysiiyay oo dhan ”Álvaro Anguix.
Soo bandhigida sii waday ayaa ahayd midkii Eulogio Escribano, oo tusaya sida aaladaha ay u yarayn karaan arrinta ku-takri-falka, iyada oo nuxurkeedu ahaa AytoSIG. Kaabayaasha xog aruurinta ee hoolalka magaalooyinka yar yar. Degmooyinka yar yar ee ay ku talaabsatay Escribano, waxay tixraacdaa kuwa ku yaalley gobollada miyiga, oo aan haysan raasamaal yar iyo kheyraadka ay ku shaqeeyaan. Markaa, muxuu ahaa soo jeedinta, iyaga oo u maraya gvSIG Online, waxay isku darsadeen howlo taxane ah sidaa darteed dadka ay tahay inay bulshada gaarsiiyaan macluumaadka, waxay u baahan yihiin oo keliya inay galaan nidaamka oo adeegsadaan batoon si ay u muujiyaan dhammaan macluumaadka la codsaday.
"Waxaad ka heli kartaa adeegsiga aaladaha noocan ah ee GIS ee degmooyinka muhiimka ah, halkaas oo ay dad badani kala tashanayaan macluumaadka, laakiin degmooyinka yaryar ayaa sidoo kale haysta caqabado maalin walba ah" Eulogio Escribano -AytoSIG
Buuggan wuxuu ku dhammaaday soo-bandhigidda Antonio García Benlloch Maareynta kaabayaasha Magaalada Béteraiyo Vicente Bou oo ka tirsan Golaha Magaalada Onda oo uu weheliyo Silvia Marzal UTE Pavapark-Nunsys, oo soo bandhigay kiis guul leh oo laga hirgaliyay IDE Golaha Magaalada Onda. Kiiskan ugu dambeeyay wuxuu ahaa mid khaas ah, maxaa yeelay Golaha Magaalada Onda wuxuu horey u haystay laba isku day oo lagu dhisayey IDE. Si kastaba ha noqotee, horeyba u fahamka muhiimadda aaladda sidan oo kale ah, waxay noqotaa mid lama huraan ah in la gaaro hirgalintiisa, iyadoo lala kaashanayo jilayaasha kale ee maxalliga ah, kuwaas oo ka caawin doona bixinta macluumaadka lagama maarmaanka u ah quudinta SDI.
Gabagabadii, cabashooyinka ayaa laga keenay kaqeybgalayaashu iyo kaqeybgalayaasha, kuwaas oo cadeeyay in ay jiri karto suurta gal ah in caadi laga dhigo ama kor loogu qaado adeegsiga magac gaar ah oo dadka oo dhan ah. Laakiin maahan in si fudud loo dejiyo halbeegyo gaar ah oo loogu talagalay soo bandhigidda ama maaraynta xogta, maadaama tani ay caqabad weyn ku tahay kuwa ku lug leh adduunkan maaraynta xogta xog aruurinta.
Haddii ay tahay hawl adag, in la fahmo awoodda ay qalabyada sida gvSig suite ay bixin karaan, qiyaaso iskuday inaad isku raacdo xog-ururiyaha, masuuliyiinta, iyo dhammaan kuwa ka qayb qaadanaya hanaankan maaraynta macluumaadka, haddii sida Alvaro Anguix yiri "Maanta waxaa jira moodallo xog ah oo waad isku dayi kartaa tan marka hore, laakiin qofna kuma qasbi karo mas'uuliyiinta - marka ay taasi jirto degmooyinka - inay adeegsadaan / la qabsadaan qaabkan xogta."
Ugu dambeyntiina, waxaas oo dhami waa shaqo aan qofna dirin oo cidna wax siinin, waana mid cakiran, laakiin ka faa’iideysiga ereyada “software-ka bilaashka ah iyo bulshada”, waxay noqon kartaa bilow bilow si loo abuuro meel kaqeybgal ay ku heshiiyaan tilmaamaha, hase yeeshe, waxay umuuqataa waa mid aad u adag oo loo maareeyo dhamaan fikradaha hal. Taasi waa sababta shirkadaha gaarka loo leeyahay ay u abuurayaan magac cayiman ka dibna adeegsadayaasha kale / farsamoyaqaanada ay ku soo biiraan "Eulogio Escribano - AytoSIG
Dhanka kale, jaahilnimada xog aruurinta iyo khalkhalgelinta ayaa ah mid aad u jilicsan, maadaama marar badan qaar ka mid ah macluumaadka xayeysiinta loo dhiibo oo lagu xidho kayd xog, ka dibna ay dib ugu soo celiyaan gebi ahaanba barokacay, iyada oo loox miis leh oo cabsi laga qabo in la isticmaalo. . Qulqulkaan gaarka ah, daciifnimada wadamada sida Spain ay wali ku leeyihiin kiiskan waxaa lagu arkijiray marka loo eego maaraynta macluumaadka iyo isticmaalka aaladaha.
Buugga hal-abuurka leh ayaa loo gudbiyaa Noolaha iyo Deegaanka, kiisaska xogta xorta loo adeegsaday - sawirro dayax-gacmeed oo bilaash ah - iyo gvSIG oo ah aalad maareynta xogta, gaar ahaan bandhigga Qiyaasta heerkulka dusha sare ee Landsat 5 sawirro taariikhi ah iyada oo loo marayo dayactirka hal-hawo hawo oo kululaynta webi kuleylka webiga Tempisque-Bebedero. Rubén Martínez (Jaamacadda Costa Rica). Daraasaddan, dariiqa soo-saarista dayax-gacmeedka ayaa asal ahaan lagu muujiyey, kormeeridda aagagga.
Casharkii ugu dambeeyay, oo loo hibeeyay Geomatics, wuxuu ku bilaabay khudbaddii Antonio Benlloch, oo ka hadlay adeegsiga GIS ee ay khabiiro u yihiin Geomatics, dib u eegis ku samaynaya taariikhda, oo muujinaya sida istaraatiijiyaddii ugu weyneyd ay u adeegsadeen sawir-qaadista. Ku guuleysiga ficiladaada. Benlloch wuxuu sii watay sharaxaadda qaybaha codsiyada ay xirfadyahanadu ku leeyihiin cilmiga farsamada gacanta, si ay u sii wadaan muujinta in aysan kaliya ugu heellanayn naqshadeynta sawir-qaadeyaasha.
Ururka gvSIG wuxuu muujiyey inuu sii wado sharadka jiilka cusub, taakuleynta iyo casuumada ardayda u horseeda cilmi baaris muhiim ah Maalmahan. Caalami Iskuulka noolaha iyo bay'ada, Ángela Casas ardayga ayaa qaatay sagxadda wuxuuna ka hadlay adeegsiga gvSIG ee maareynta deegaanka, iyada oo mowduuca laga hadlayo Keydka Micro of flora in Sierra del Cid, Petrer (Alicante). Dhiniciisa, ardayga Andrés Martínez González, oo ka socda Jaamacadda Automatiga ee Mexico, ayaa soo bandhigay Tilmaamaha GINI Indomation ahaan aalad loogu talagalay xisaabinta juqraafiyeed ee xisaabaadka gvSIG.
Horeba u ahayd maalinta ugu dambeysa ee Shirka, ka soo qaybgalayaasha kaqaybgalayaashii hore iskugu diiwaangeliyay aqoon isweydaarsiga xorta ah, sida
Hordhac ku saabsan gvSIG Online iyo Thermal Remote Sensing oo leh gvSIG, halkaas oo ay ka heli doonaan shahaado Ururka GvSIG.
Waxaan carrabka ku adkeynay in aan horay uga soo qeybgalnay shirar cilmi baaris oo sidan oo kale ah, oo ay mudan tahay in la aqoonsado dadaalka ururka gvSIG ee ah in la muujiyo in barnaamijyo bilaash ah aan sameyn karno oo aan maareyn karno dhammaan noocyada xogta geospatial. Inbadan ayaa wakhtigan ku xidhan software-ka, waana sababta kaliya ee loo diiday inay arkaan iyo sahamiyaan dhamaan faa'iidooyinka tan iyo kuwa kale ee aan ahayn. laakiin sidoo kale sababtoo ah awoodda lagu iibinayo tan iyada oo loo marayo hannaan isku-dheellitiran ayaa macnaheedu yahay in laga tago boosaska xag-jirnimada iyo diiradda la saarayo tartanka.
Post Previous«Previous 15as International gvSIG Shirka - 1 maalin
Post Next Plex.Earth Timeviews wuxuu siiyaa xirfadlayaasha AEC sawirada dayax-gacmeedka ugu dambeeyay gudaha AutoCADNext »